News | शिक्षा
News | Tag: शिक्षा
काठमाडौँ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने भएको छ ।
शिक्षामन्त्री भन्छन् : अबकाे शिक्षा समाजवादी, विद्यार्थी नेताकाे प्रश्न : कस्ताे खालकाे समाजवादी ?
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संविधानले नै मुलुकलाई समाजवादोन्मुख उल्लेख गरेकाले सार्वजनिक शिक्षालाई समाजवादतर्फ लैजानुपर्ने बताएका छन् । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल र राष्ट्रिय युवा परिषद्ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक शिक्षामा सबलीकरणः समाजवादी शिक्षा, अवस्था, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा उनले उत्पादनमुखी शिक्षा नै आजको आवश्यकता भएकाले अबको शिक्षा समाजवादी हुने बताए ।
कर्णालीमैत्री पाठ्यक्रम निर्माण गर्दै कर्णाली सरकार
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णालीमैत्री पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि मन्त्रालयले रु. ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले कर्णालीका विद्यार्थीले रैथाने भाषा, कला–संस्कृति प्राकृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाका बारेमा ज्ञान हासिल गरुन् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा जोड दिएको हो ।
एसइईको पूरक परीक्षा साउन २६ र २७ गते, साउन १५ गतेभित्र फाराम बुझाउन आग्रह
काठमाडौँ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइईको पूरक (ग्रेड वृद्धि) परीक्षा आगामी साउन २६ र २७ गते सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि बेलायती विदेश मन्त्रालय र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच सहमति
काठमाडौँ । विदेशी विश्वविद्यालय र कलेजहरूसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूको आधिकारिकता र वैधानिकतामाथि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गर्दछ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय बेलायत सरकार र नेपाल सरकारबीच यस विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत हप्ता गरेको युरोप भ्रमणको क्रममा तीन दिन बेलायतमा रहँदा बेलायती विदेश मन्त्रालय र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि पनि सहमति भएको हो ।
मेडिकल कलेजकाे शुल्क विवाद अध्ययन समितिकाे समयावधि थप
काठमाडौँ । मेडिकल कलेजहरूको शुल्क विवादलगायत विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको समायावधि पुनः एक महिना थप भएको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको चैत २६ गते बसेको बैठकले समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ ।
पन्ध्र विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने माग
भक्तपुर । पूर्वप्राथमिक विद्यालय तहमा काम गर्ने शिक्षकले प्राथमिक तहका शिक्षकसरहको तलब सुविधाको माग गर्दै आज भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
मेलम्ची । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले शिक्षकलाई अबदेखि मासिक रुपमा तलब उपलब्ध गराउने भएको छ ।